Faylo-daroogada - qaabeynta iyo soo dejinta, dabaqa iyo qurxinta derbiga
Dariishada marinka-darbiga iyo faybarka, fikradaha iyo fursadaha naqshadeynta
Faylo-dhiska caadiga ah ee isgoysyada - doorasho aad u fiican oo loogu talagalay naqshadda dabaqa ama derbiyada ee qolka adag. Cabbitaanka quraarada ee halkan waxaa lagu daboolayaa soo-gaadhista kordhinta qoyaanka, boodhka, wasakhda, jajabinta farsamada. Markaad dooraneysid qalab dhameystiran, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid sifooyinka quruxda iyo waxqabadka.
U soo dheji marinka wado
Meelaha iyo meelaha jidka ah, dabaqa ayaa si dhaqso ah loo xiraa, derbiyada iyo albaabadu waa nijaasoobaan. Dhoobo waddo ayaa si joogta ah loogu keenaa halkan, iyadoo dhaqdhaqaaqa xoogan, lakabka muraayadda ee dabaqa ayaa si deg deg ah looga tirtirayaa. Dardar gelinta hababka xun ee nadiifinta joogtada ah leh isticmaalka qalabka wax lagu nadiifiyo, kuwaas oo leh saameyn burbur ah dusha sare. Foornooyinka dhoobada ee waddada - waa doorasho fiican, taas oo gacan ka geysan doonta xalinta dhibaatooyin badan oo soo kordhay.
Faa'iidooyinka isticmaalka faybar ee waddada:
Xulo badan oo sawirro ah ayaa kuu ogolaanaya inaad sameysid noocyo kala duwan oo ka sameysan foornada lagu qurxiyo ee isgoysyada, qurxinta kala duwan iyo isku darka kale ee asalka ah.
Ceramics iyo stoneware storeware waa qalab joogto ah oo joogto ah.
Foornooyinka quruxda badan iyo masjidka ku yaal waddada si fiican u dulqaado qoyaan badan oo ka soo horjeeda saameynta nadiifiyaha.
On dusha si siman, wasakh ururiyo ka yar oo waa sahlan tahay in la nadiifiyo.
Fayodhka fuula ee waddada, waxaad helaysaa dabka dabaysha iyo dabacsanaanta deegaanka.
Waxyaabahan aan waxyeello u keenin caaryaal iyo cayayaanka waxyeello leh.
Dariishada marinka oo leh qurxin adag oo dib loo soo celin karo, waxaa lagu bedeli karaa walxaha waxyeellada leh ama meelaha guud ee ku jira.
Foynta dhulka ee wadiiqada
Waxaa jira xulaf badan oo ah ceramics oo leh noocyo kala duwan oo ah qaababka iyo midabada, tilmaamayaasha awooda. Dadka aan khibradda laheyn waxay badanaa ku bixiyaan dareenka keliya ee qaabeynta iyo kharashka, iyada oo aan akhriyin sifooyinka baasaboorka, khaladka sameeya markay iibsadaan, oo si degdeg ah u saameeya hawlgalka daboolka. Foornada casriga ah ee marinka hore ee albaabka laga galo guriga iyo dabaqa qolka waa inuu ahaadaa mid adag, badbaado leh isla markaana buuxiya shuruudaha casriga casriga ah.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee foornada dabaqa wanaagsan:
Soo iibso dhoobada oo leh cimri dheer oo loogu talagalay qolal leh dhexdhexaadin dhexdhexaad ah oo sarreeya (qaybta PEI 3 iyo wixii ka sarreeya).
Dariishada marinka waa inay lahaataa nuugid qoyaan ilaa 3%.
Dhulka waa ka fiican yahay in la gato maaddooyin leh isku dheelitir la'aan isku-dhafan oo ah 0,75% (warqadda ugu yar).
Wax soo saaraha - waxyaabaha ugu fiican waxaa laga sameeyaa Talyaaniga iyo Spain, maaddooyinka dhamaystiran ee ka yimaada Poland iyo Turkiga waxaa lagu riday tayo wanaagsan.
Foostada derbiga ee waddada
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qalabka kale ee loo yaqaan 'ceramics' iyo 'porcelain stoneware'. Xalka maadiga ah waa in la isticmaalo faylka si loo qurxiyo qaybta hoose ee booska, taas oo ka sii dillaacta wasakhda, daboolka xoolaha xayawaanka ah, waxaa lagu nadiifiyaa nadiifinta qoyan ee joogtada ah.
Fayeysiinta foornada darbiga ee derbiyada ayaa leh faa'iidooyin badan, laakiin waxaa jira waxoogaa khasaare ah oo ka yimaadda habkan qurxinta xaalada. Waa inaad si taxadar leh u bixisaa dusha sare ee dusha sare, si aad u qabato tayada tayada leh. Saamilada labaad - sunamiyada ayaa leh dabeecado kulul oo hooseeya, sidaas darteed taabashada darbiyada qabowga waxay keeni karaan raaxo la'aan.
Fursadaha faylka ee waddada
Marka la soo saaro wadiiqooyinka, waxay ku xiran tahay sida xajmiga foornada, iyo naqshadeeda. Waxaanu bixinaynaa fiiro gaar ah oo ku saabsan qolalka dhaadheer iyo qafiifka ah, halkan qalad kasta wuxuu keenayaa in isbedelka qolka lagu dhex daro tunnel mugdi ah ama aan lahayn. Foornooyinka quruxda leh ee dabaqa ku jira wadiiqooyinka ama derbiyadu maaha inay xakameyaan aragtida qofka, ciriiri meel, ka dhiga midabaynta gudaha. Ha iloobin waxqabadka dhulka ama derbiga, daboolka, halka meesha ugu caansan ay tahay, si tartiib ah u jiifin maqaarka hooska madow.
Noocyada fikradaha loogu talagalay derbiyada qurxinta ee waddada oo leh faybar:
Fayodhka qaabab badan oo muuqaal ah oo kor u qaadaya qolka.
Iyada oo la soo dhejiyay jiifsan, derbiyada ayaa si muuqata u fiday dhinaca dhinacyada.
Qaabka qaabka caadiga ah, walxaha iftiinka leh ayaa loo isticmaalaa qaybta sare ee derbiyada, iyo hoosta waxaa lagu sameeyey midab madow.
Naqshad qurux badan oo muuqaal leh qaab dabiici ah ayaa la heli karaa haddii aad isticmaasho dhoobada cagaarka ah, midabka cagaarka ah ama qoryaha, maaddooyinka ku jira mawduuca badda.
Taageerada qaabka oriental waa in ay doorbidaan iibinta faylka marinka wadada ee leh qurxinta, shimbiraha yaryar, hieroglyphs, Ahraamyada. Doorashadan waxay ku habboon tahay hareeraha ballaaran, oo derbiyada quruxda badan leh iyo midabkuba ay muuqdaan kuwo faa'iido leh, oo ay ku dhameeyaan khadadaha dahabka ah iyo turquoise.
Fayladda naxaasta ee waddada
Dadka aan khibradda lahayn waxay tixgeliyaan midabkan midabada badan iyo kuwa aan xiiseyneynin, laakiin hab wanaagsan, qaabka cirifka ee habka dhismaha ee leh faylka dabaqa ayaa noqon doona xal cusub oo wax ku ool ah. Haddii aad rabto inaad abuurto jawi ganacsi, ka dibna isticmaal kombyuunta qabow ee dhammaadka, isugeyn kulul waxay ka dhigeysaa mid gudaha ah oo casri ah. Dhulku waa inuu ka soo horjeedaa asalka guud ee darajada ee derbiyada iyo alaabta guriga, sidaas darteed u isticmaal qalab leh hindhicid cad. Aragtida ugu fiican waa dufka cawliga ee qaabka Scandinavian, jihada casriga casriga casriga ah, casriga casriga ah, naqshad adag oo naqshadeysan.
Foornada cad ee waddada
Dumar badan ayaa ka ilaaliya dhammaadka cad, iyaga oo tixgelinaya xitaa ciriiriga, laakiin fayadhka iftiinka ee waddada ayaa leh faa'iidooyin la taaban karo. Qurxinta barafka-cad-cad waxay hareeraysaa qulqulka qotomiska ee geometry ee meelaha, wuxuu ka dhigayaa qolka dheer ee caajiska ah oo u furma iyo mid aad u ballaaran, midabkani waa asal fiican oo loogu talagalay alaabta iyo qurxinta. Noocyo kala duwan oo nadiif ah ayaa lagu dari doonaa qaabeynta muraayadaha caddaanka ah ee la isku qurxiyo maro madow iyo midab leh, isticmaalka qurxinta dusha sare, jardiinada ama guddiga ceramics gudaha gudaha cad.
Madow iyo caddaan cad oo ku yaal waddada
Iskudhafka shaterka ee dabaqa muraayadaha madow iyo caddaanku waa xal caalami ah, oo faa'iido u leh qaab kasta. Doorashadani waa mid sahlan oo lagu fuliyo oo fidiyo booska, waxay u muuqataa mid xariif ah. Foostada Tikidhada ee ku yaala aqalka ayaa eegi doona xiiso dheeraad ah haddii gudaha ay isticmaasho armaajo alwaax ah, armaajooyinka, kuraasta. Haddii lakabkoodu yahay mid ballaaran, markaa waxaad ku xiran kartaa alaabta guriga lagu gashado oo leh madow iyo madow. Isku day in aad adeecdo xeerka ugu muhiimsan - waa yaraanta waddada, in ka badan qolka aad u baahan tahay inaad isticmaasho alaabta nalalka ah iyo faaruqin yar oo madow.
Boorashka xayawaanka ee waddada
Muujiyayaasha Brown waa dhexdhexaad, dabiiciyan iyo dabiici ah, waxay ku haboon yihiin qaab kasta. Foornada mugdiga ah ee isgoyska leh qorrax madow ayaa qolka u muuqata u muuqata, waxay u fiicantahay in la isticmaalo dhirbaaxo dherer leh oo leh saameyn iftiiminaya oo dhexdhexaadinaya dadka badan. Dabaqa Boorash waxay si fiican u la socdaan caramel, huruud, kareem, cawl, buluug, midab buluug ah. Qolka wadiiqada weyn, waxaad si ammaan ah u dabooli kartaa midabada hodanka ah ee midabkeedu yahay - shukulaatada, cognac, madow madow.
Fursadaha tufaaxa ee caanaha leh ee loogu talagalay waddada:
Xayawaanka Brown ee looxa.
Meelo madow oo adag oo leh midabo kala duwan.
Brown wuxuu ku dhammeeyaa dhagaxa, lebbiska ama birta.
Maraqa Beesha ee wadiiqada
Dhar gogolku wuxuu u muuqdaa mid xiiso leh oo ka duwan maalin kasta, hooskiisu wuxuu ku kala duwan yahay bunni ilaa kareem iyadoo ku xiran iftiinka nalka. Isku-shaandhayn wanaagsan - dabaqyo madow oo leh muraayad looxyo qoryo iyo derbiyo qafiif ah. Laguma talin karo inaad gebi ahaanba derbi derbiyadeeda ku dhejiso maaddo badan oo qolka weyn leh, waxaa fiican in la xoqo xaaladda xajmiga, xayndaabyada, qurxinta kale. Naqshadeynta foornada ee isgoysyadu waa midab khafiif ah oo ku habboon dabaqa qolka dhaadheer leh, derbiyada qurxinta leh ee lagu qurxiyo midab, miro, dhoobo ama midab buluug ah.
Muraayadda madoow ee waddada
Qalabka qurxinta sawir-celinta ayaa si isdaba-joog ah u bedelaya aragtida booska waxaana dhaqan ahaan loo isticmaalaa qolal yar. Waxaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo derbiyada waddooyinka, iyagoo badalaya halkan muraayadaha waaweyn ee muraayadaha ah ee ku yaal xayndaabka, iyada oo aan la qaadin meel qaali ah. Naqshadeynta foornada waddo dhuuban oo leh muraayad waxeey ka duwan tahay tiknoolajiyada wax soo saarka.
Noocyada muraayada muraayadda ee waddada:
Muraayada muraayada oo casri ah oo ku yaal waddada oo leh cirbado saafi ah iyada oo aan la isku darin dareeraha.
Foorno leh waji.
Qaadashada muraayad dhoobo - foorno naxaas leh, dahab, lacag, chrome.
Muraayadaha muraayadaha ee fiilooyinka ku jira hareeraha.
Muraayada madadaalo leh qaabka ciidda.
Qalabka Mirror leh dusha sare ee saddex geesood ah.
Foosto loogu talagalay qoryaha waddada
Meel qurxin ah oo qurxin leh oo ku yaala waddada geedka hoostiisa ah ayaa loo isticmaali karaa dabaqa, adoo saaraya garoon, kuraas ama laminate. Waxay ku habboontahay meel caadi ah, waddan ama caddayn , beddel ahaan alwaax dabiici ah. Hoolalka ballaaran ee dhirta dhoobada ah ama dhoobada dhoobada ama kuwa kale oo qaali ah waxay u muuqdaan kuwo qaali ah oo qurux badan. Qalabka dabacsan ee dusha sare leh oo tayo sare leh ayaa kor u kici doona xajmiga maalinlaha ah ee qolka oo leh gaadiidka sare, oo ka hadal dhadhanka wanaagsan ee milkiilaha.
Meelmarinta Marble ee waddada
Dhuxulada dabiiciga ah waxay u egtahay mid xariif ah, qurux badan oo qaali ah bay'ad, laakiin si fiican uguma falin kiimikada kiimikada, si dhaqso ah u nuugo wasakheynta dusha sare ee dusha sare lehna kharash badan. Muraayadaha casriga ah waxay si fiican ugu daydaan dhagax kasta oo dhagaxa duurjoogta ah oo aan laheyn faa'idada liistada. Dariishada marinka dheer ee hoostiisa marmarka qaarkood wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qurxiyo derbiga iyo derbiyada, si aan caadi ahayn u abuuraan qalab casri ah, dhab ahaantii kakoobanaanta muraayadda iyo madadaallada buugan.
Foosto loogu talagalay lebbiska waddada
Darbiyada lebiska ah ee qaawan waxay caan ku yihiin noocyo badan, lakiin laguma talin karo in lagu qurxiyo wax la taaban karo ama dusha sare ee alaabada leh ujeedada loo qurxiyo. In naqshadda waxaa inta badan loo isticmaalaa faybar for leben , daboolay glaze leh gargaarka sawir, taas oo dhab ah soo celin qaabka of dhismaha. Waa jilicsan, si fiican u ilaalisa kuleylka, iftiinka, si sax ah loogu dhejiyo derbiga leh xabo. Go'aaminta deyrta ee lagu dooranayo waddada, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso qaabka gudaha gudaha, taas oo ku xidhan tan, dooro naqshadeynta iyo qurxinta dhoobada.
In qaabkee ah waa foornada lebbiska ku haboon:
gudaha gudaha ee ujeedooyinka qowmiyadeed.
Foornada foornada ee waddada
Naqshadeynta patchwork waa asalka iyo deg deg ah, waxay jecel yihiin taageerayaasha habka aan caadiga ahayn ee naqshadda gudaha. Daboolka daboolka ama derbiga ee qaabkani wuxuu u egyahay maqaar aad u fiiqan, oo laga soo ururiyey faahfaahin badan oo midabo leh. Foornooyinka dabaqa ah ee waddada yaryar ee patchwork ayaa lagu dabaqaa waddanka, farshaxanka farshaxanka, minimalism, Provence, goobta isbeddelka. Maqnaanshaha ururinta diyaarka ah, waxaad abuuri kartaa naqshado asaasi ah oo naftaada ah adiga oo isticmaalaya muraayado ka soo jeeda dhinacyo kala duwan, si guul leh ula midoobaya qaababka joometeriga ama quruxda midabka leh.
Dib u soo celinta kuraasta
Miiska qafiska ee muraayadaha
Taarbooyinka derbiga ah
Ku rakibida musqusha musqusha
Warqad loogu talagalay qolka carruurta
Ku rakibo muraayad ku jirta musqusha
Naqshada jikada yaryar
Foornada Facade ee dhagax
Deedka ka samaysan alwaax qallafsan
Gacanta kabadhada gacanta gacanta
Qolka carruurta yaryar
Xagee laga helaa Sannadka Cusub?
Diiwaangelinta fasalka 1-da Sebtember
Sidee loo helaa nuska kale?
Jaundice - Guryo daawo iyo contradindications si ay geedo ah qaab ah decoctions iyo tinctures
25 dhibcood oo kala duwan oo doonaya in ay u muuqdaan shaqooyin fanka
Dharka xagaaga oo dheer
Munaasabada jasiiradda: Sidee ayuu Chris Hemsworth u dabaaldegay sanadkiisii ​​34aad?
Eye hoos u dhaca Ophthalmoferon
Koboca iyo xudduudaha kale Holland Rodin
Shukulaatada kulul ee leh shukulaatada
Cabsida godadka - cabsida ama cudur ama sida looga takhaluso?
Sidee loo tirtiraa saxaafad qurxoon bil ah?
Windows ka samaysan qori
Noocyada Cuntada iyo Qalabka Gienesh
Eremurus - beerashada iyo daryeelka
Sida loo kariyo baradho la shiiday?
Maxaa la siinayaa ilmo 10 sano ah?
Midabka dharka casriga ah 2014